Wararkii ugu dambeeyey magacaabista golaha Wasiirada & Madaxda sare ee dowlada oo caawa.. | Gaaloos.com
Home » News » Wararkii ugu dambeeyey magacaabista golaha Wasiirada & Madaxda sare ee dowlada oo caawa..
Wararkii ugu dambeeyey magacaabista golaha Wasiirada & Madaxda sare ee dowlada oo caawa..
Waxaa daqiiqadihii ugu dambeeyey dib u dhacay magacaabista xubnaha cusub ee golaha wasiirada Xukuumada cusub ee Somalia oo maanta illaa caawa si weyn loo sugayey.
Munaasabad kooban oo lagu shaacin lahaa liiska golaha wasiirada ayaa la baajiyey, iyadoo weriyeyaal looga yeeray xarunta madaxtooyada oo munaasabadan lagu qaban lahaana lagu wargeliyey iney kala dareeraan.
Rasmi ahaan lama oga sababaha dib u dhaca ku keenay caawa magacaabida golaha wasiirada, hase ahaatee warar hoose oo laga helayo Madaxtooyada Somalia ayaa sheegaya in weli uu mugdi ka jiro shaqsiyaadka loo magacaabayo labo Wasaaradood, iyadoo ay jiraan fara gelin ay aRrimahan ku hayaan madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo beelaha waaweyn qaarkood.
Madaxweynaha iyo ra’isul wasaaraha Somalia ayaa caawa markii ay baaqatay ku dhawaaqida golaha wasiirada ka dib waxay galeen kulan ay albaabadu u xiran yihiin, iyagoo ka tashanaya sidii ay turxaan bixin lahaayeen dib u dhaca yimid.
Waxaa aad loo filayaa in caawa ama beri subax lagu dhawaaqo golaha wasiirada, iyadoo ay xitaa suuragal tahay inaan wax munaasabad la qaban, liiska golaha wasiiradana laga baahiyo warbaahinta dowlada iyo baraha bulshada.
Madaxweynaha iyo raisul wasaaraha oo culeysyo badan ay ka heystaan dhinacyo badan ayaa la filayaa in wada tashiga ay caawa leeyihiin uu noqdo kii ugu dambeeyey ee ay ka yeeshaan magacaabista golaha wasiirada oo si weyn shacabka Soomaalidu ay ugu dheg taagayaan.
Title: Wararkii ugu dambeeyey magacaabista golaha Wasiirada & Madaxda sare ee dowlada oo caawa..